राष्ट्रिय समाचार – Page 191 – धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
लोकमार्ग क्षेत्रमा प्रहरीको सक्रियता
बैरेनी (धादिङ्न्युज)। लोकमार्ग क्षेत्रमा हुने अनैतिक क्रियाकलापलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रहरी कार्यलय धादिङले असार १४ गते देखि१ हप्तासम्म लोकमार्गिय अपराध नियन्त्रण कार्यको सञ्चालन गर्ने भएको छ । बिहीवार धादिङको मासटारमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो प्रहरीले सो कुराको जानकारी गराएको हो । धादिङ जिल्लाको लोकमार्गहरु तथा..
नेपाल र चीनबीच महत्वपूर्ण तीनवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाण्डौ, १२ असार(धादिङन्युज ) । नेपाल र चीनबीच मंगलबार महत्वपूर्ण तीनवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीको उपस्थितिमा मंगलबार नेपाल र चिनियाँ अधिकारीबीच दुईपक्षीय आर्थिक साझेदारी, चुनावमा चीन सरकारले गर्ने प्राविधिक सहयोग र सशस्त्र प्रहरी एकेडेमी निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । चीनले..
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिताबारे निर्वाचन आयोग र ७४ दलबीच छलफल
काठमाण्डौ, १२ असार(धादिङन्युज ) । निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि तयार पारेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदाको बारेमा आज ७४ वटा दलसँग छलफल गरेको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय ३९ वटा दलमध्ये मंगलवार पहिलो चरणमा आयोगले ७४ वटा दलसँग छलफल गरेको हो । आचारसंहितामा समावेश गरिएका बुदाँबारे..
क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूबाट सपथ ग्रहण , आयोगले मंगलवारबाटै औपचारिक रूपमा काम थाल्यो
काठमाण्डौ, १२ असार(धादिङन्युज ) । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका पदाधिकारीहरूले मंगलवार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । आयोग गठन भएको १२ दिनपछि अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सपथ भएको हो । यसअघि आयोगका अध्यक्ष ताहिर अलि अन्सारीलाई कसले सपथ गराउने भन्ने विवादले गर्दा सपथ कार्यक्रम हुन सकेको थिएन । मंगलपवार कामुप्रधानन्यायाधीश..
किशोरीलाई सामुहिक बलात्कार गर्नेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिने
हेटौंडा, १२ असार(धादिङन्युज ) । हेटौँडाको नारायणी होटेल एण्ड लजमा एक किशोरीलाई सामुहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरुलाई जिल्ला अदालत मकवानपुरले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि १० दिन म्याद थप गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानमा पिडित युवतीकै आफ्नै भाई नाता पर्नेकै..
राष्टपति यादवको शरीरमा कुनै रोग देखिएन शुक्रबार काठमाडौं आइपुग्ने
प्रतीक लामिछाने काठमाण्डौं,११ असार । जापानको टोकियोस्थित टोकियो युनिभर्सिटि अस्पतालमा उपचार गराईरहनुभएका राष्टपति डा. रामबरण यादवकोशरीरमा कुनै रोग नभेटिएको अस्पतालले जनाएको छ । गत सोमबार उपचारको लागि जापान जानुभएका राष्टपति यादवको झण्डै १ हप्ताको स्वास्थ्य परिक्षण र मेडिकल रिपोर्टबाट उहाँकोस्वास्थ्य सामान्य रहेको दोएको टोकियोमा..
तामाङ साहित्य सम्मेलन सकियो कुलपतिमा अमृत योञ्जन
काठमाडौं ,११ असार । तामाङ सहित्य सम्मेलनको दोश्रो भेलाले अमृत योेन्जन तामाङको कुलपतिमा ९ सदस्यीय प्राज्ञ परिषदको गठन गरेको छ । सम्मेलनले उपकुलपतिमा बुद्ध योन्जन लामा, सचिव खोजराज गोले, कोषाध्यक्ष राम.बि लामालाई चयन गरेको छ । यसैगरी परिषद सदस्यहरुमा बिना तामाङ, अर्जुन पाख्रिन, सन्चु ब्लोन, सिर्जना गोले र ढकबहादुर घिसिङ चयन हुनुभएको छ..
विश्वविद्यालयको लापर्वाहीले भविष्य ‘बर्बाद’
काठमाडौं,९ असार, । नपढेर र परीक्षामा लेख्न नजानेर फेल हुँदा धेरैले चित्त बुझाउँछन् । तर राम्रो पढेर र परीक्षा पनि राम्रो दिएर नतिजा पर्खेको विद्यार्थी फेल भयो भने के गर्ने ? बेलाबेला परीक्षा सञ्चालकहरुले गर्ने लापर्वाहीले केही विद्यार्थीले यस्तै नियति भोग्ने गर्छन् । राजधानीको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा बीएससी दोस्रो वर्षमा पढ्ने..
बाबुआमा हेला गर्नेलाई ३ महिना कैद र २५ हजार जरिवाना हुने ,आम्दानीको दस प्रतिशत छुट्याइनुपर्ने
काठमाडौं,७ असार, । तपाईँ सरकारी, गैरसरकारीलगायत अन्य सेवामा रही तलबभत्ता बुझिरहनुभएको छ ? त्यो पैसा श्रीमती, छोराछोरीका लागि मात्रै खर्च गरिरहनुभएको छ ? परिवारमा ६० वर्षभन्दामाथिका हजुरबा, हजुरआमा, बुबा र आमा पनि हुनुहुन्छ तर उहाँहरूका लागि आफ्नो आम्दानी छुट्याउनुभएको छैन भने याद गर्नुहोस् । अब तपाइँले ती अग्रजका लागि पनि आफ्नो..
काठमाडौं, असार ७ – आज २१ जुन । सामान्यतः आजको दिन पृथ्वीमा दक्षिणी गोलाद्र्धमा दिन छोटो र उत्तरी गोलाद्र्धमा दिन लामो हुने गर्छ । नेपालमा सूर्योदय र सूर्यास्तकोबीचको समय अनुसार आजको दिन झण्डै १४ घण्टाको हुनेछ । भोलिदेखि दिन छोटो र रात लामो हुनेछ । आजदेखि औपचारिक रुपमा गर्मी शुरु भएको मानिन्छ । सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा आफ्नो..
उमावि आचारसंहिता सबै जिल्लामा पुग्यो; पालना नगरे कार्बाही
काठमाडौं, ७ असार। उच्चमाध्यामिक शिक्षा परिषद्ले हालै जारी गरिएको आचारसंहिता सबै जिल्लाका विद्यालयमा पुगेको जनाएको छ। परिषद्को काठमाडौँ कार्यालयद्वरा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्का सहसचिव तथा अनुगमन समितिका संयोजक नारायण कोइरालाले आचारसंहिता पालना गर्न सबै उमाविलाई आग्रह गर्नुभयो। आचारसंहितामा भर्ना प्रक्रिया,..
मलेशिया पुगेका ३३ जना नेपाली पाँच दिनदेखि मलेसिया विमानस्थलमा अलपत्र
धादिङ, असार ४(धादिङन्युज ) । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया पुगेका ३३ जना नेपाली पाँच दिनदेखि मलेसिया अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अलपत्र परेका छन् । जेठ ३१ गते नेपालबाट मलेशिया उडेका ३३ जना मध्य १९ जना काठमाडौं बालाजुमा रहेको इनोभेटिभ सर्भिसबाट गएका थिए । शुक्रबार दिउँसो नेपालबाट मलेसिया उडेका ति सबैलाई शनिवार विहान मात्र..
पौडी खेल्ने क्रममा त्रिशूली नदीमा डुवेर पांच जना बेपत्ता
कुरिनटार,१ जेठ ( धादिङ न्युज) / चितवनको कुरिनटार स्थित त्रिशूली नदीमा पौडी खेल्नेक्रममा शनिवार दिउंसो ३ वजे तिर पांच जना नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका छन् । चितवन जिल्लाको दारेचोक गाविस वडा नम्बर ३ कुरिनटार स्थित त्रिशुली नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ बौद्धिकनगर सापकोटा चोकका मनिषा रेग्मी, रजनी रेग्मी,..
मंसिर ४ गते चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय
हिम विष्ट/ काठमाडौं, जेठ ३० - (अपडेट) सरकारले मंसिर ४ गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको टुंगो लगाउन मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मंसिर ४ गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा..